Ukudibana ne-'Hemlock Grove 'ye-Cast of Netflix
I-TV kunye neFilimu Uloyiko
'Hemlock Grove': I-Netflix Series Cast kunye nabalingiswa
by UMark H. Harris
Iingqungquthela zobuGurha ziKhwitha, Ubudlova nobumnyama
"I-Hemlock Grove" yi-Netflix yangaphambili imfihlakalo / i-horror series eyaqhutyelwa iinyanga ezintathu, ngo-2013-2015. Iyenzeka kwidolophu yaseFennsylvania e-fiction yegama lothotho. I-Netflix iyichaza njengobunzima, ubundlobongela nobumnyama. Ienkwenkwezi i-Famke Janssen, i-Landon Liboiron kunye noDougray Scott kwaye ilandelwa ngu-Eli Roth. "I-Hemlock Grove" ifumaneka ekusasazeni kwi-Netflix kunye neDVD. Ilinganiswe iTV-MA, iminyaka eyi-17 +.
UBill Skarsgard njengo-Godfrey ongumRoma
U-Andreas Rentz / Abasebenzi / i-Getty Izithombe zoonwabo / i-Getty Izithombe
U-Godfrey waseRoma ungumntu ophezulu kunye nobudlova obuphezulu bezesondo. Unemfesane yegazi kunye negunya, awanelisayo ngokuqeshisa abadlali kunye nokuzicima ngexesha lesondo. Nangona kunjalo sibona uhlangothi lwamaRoma olumnene njengoko ekhusela kwaye ekhusela udade wakhe omncinci uShelley, isiqhwaga esiyimfama esenza ukuba iifutshane zombane xa ivakalelwa. UmRoma ulwa needemon ezininzi kwaye ukholelwa ukuba ukuba unokuyicombulula ukubulawa kweedolophu, unokukhulula aze azisindise ebumnyameni bakhe.
Landon Liboiron njengoPeter Rumancek
Ifoto: Gavin Bond / Netflix
I-gypsy entsha ukuya kwi-Hemlock Grove, uPetros uyinyoni engenazintlwana, umbonisi obona uthando kunye nobuhle kwizinto ezininzi abantu abazenzayo - mhlawumbi ngenxa yokuba ujikeleza kakhulu. Ukhuselekile ngokuziphatha kodwa ufumana indlela yakhe ehlabathini kwaye unenkathazo yokwenza ubuhlobo obungapheliyo.
U-Famke Janssen njengo-Olivia Godfrey
Umama omhle nomfazi oyikayo, u- Olivia ungumhlolokazi ocebile onemvelaphi engaqondakaliyo ohlala elawulwa yintsapho ye-Godfrey. Unomntu okhuselekileyo, umntu ophethe i-ajenda, kwaye icacile malunga naziphi na izinto azilungele ukwenza ukuze afike khona. Akayimfihlelo kwaye akanakulinganisekanga kwaye unomdla wokuzihlaziya, okwenza kube lula kakhulu ukudlala.
Dougray Scott njengoNorman Godfrey
Umntu ocinga ngengqondo nangengqondo, uNorman uyindoda enokuphikisana okukhulu. Wayengafuni ukuba ngumntu obala imali kwindlu enkulu phezulu kwentaba ekhangele phantsi kwidolophu encinane engezansi, kwaye ke ukhohlisa ngeyona nto ibhetele. Uhlala elwa nodadezala wakhe u-Olivia malunga nendlela yokukhulisa abantwana babo kunye nemisebenzi engathandekiyo kwi-Godfrey Institute for Research Biomedical, eyaziwayo nge-colloquially njenge-White Tower, kodwa uye wafumana kwakhona intsebenziswano naye iminyaka engaphezu kweyishumi.
UPenelope Mitchell njengoLetha Godfrey
Intombi kaNorman noMarie Godfrey, uLetha uyisisongelo kumzala wakhe waseRoma ubumnyama - uyabumnandi kwaye unomfesane kwaye uyayikhathalela ngokungaqhelekanga ukukhanga kukaRoma. U-Letha ngumntu onobubele kunye nomntu onobubele ohamba nemvakalelo eninzi yokwenza kwakhe ngokomoya, intsapho yakhe kunye nobulili bakhe.
Freya Tingley njengoKristuina Wendall
UChristina ungumdlali onobuchule kunye nomninimzi onomdla kaPetros othakazelisayo xa eva kukho i-gypsy edolophini. Ungumntu ongaphandle, kwaye uyamhlonela inkululeko kaPetros kunye naye. Ngokukhawuleza uhlahlela uPetros, wamgxotha njengenkwenkwe embi.
ULili Taylor njengoLynda Rumancek
ULynda ungumama kaPeter okhuselayo kunye nomntu ozikhuphayo. Uyi-gypsy kunye nomntu ongaphandle ohamba ngeenxa zonke-ngoku kutshanje kumzalwana wakhe omdala oshonile eHemlock Grove.
Awukwazi Ukugcina I-Zombie Ehle Phansi: Iimifanekiso eziphezulu ze-Zombies ze-10 zanamhlanje
I-Best Best (Legal) Websites ukuze ubukele i-Movie Free Horror Movies Online
Umda wexesha leMbali ye-Hollywood Horror Movies
'I-Maniac Cop' yeFranchise ye-Movie
I-Point-of-View (POV) kunye neFumane Footage Movies Horror
Iimifanekiso zama-Horror ezingapheliyo zifumaneka kwi-YouTube
Ziziphi ii-Movie eziMnandi zeVampire Zonke ixesha?
Iimifanekiso ezigqwesileyo ezigqithiseleyo eziLwandle
Isikhokelo kwiMpawu ezininzi ze-Iconic ze-Movie Horror
INtaba iKababalu: Intaba yaseBorneo ephakamileyo
I-California University yasePennsylvania Admissions
Amalungu eNkongolo Avotelwe Ngomkhosi we-Iraq we-2002
20 YeeNtshontsho ze-Fake Photoshop zamantombazana
Iincwadi malunga namakhosikazi aseMuslim
Amakheka kunye ne-Ale kwiNkonzo yamaPagan & Wiccan
I-Babysitter kunye noMntu ophezulu
IsiNgesi esisisiseko (ulwimi)
Isixhobo esibalulekileyo kwiSikolo soBhodi
Ukujika 60? Jabulela iminyaka emihle yoBomi nge-Dash of Wisdom
I-50 ye-Wedding Anniversary Toast
Iifom Worksheet zeempendulo kunye neempendulo
I-Top 5 ACT ACT Apps
IYunivesithi yaseMaine Admissions
Funda yonke iGranth Akhand Paath Sadharan Paath okanye uSajj Paath
I-Literature Literature yoLuntu oMveli
Ii-CD ezi-5 ze-Classic Classic Umculo ze-Relaxation and Meditation
Yintoni i-Viscosity in Physics?
Ukuveliswa kunye nokuThengiswa
Imifanekiso ye-Japan Attack kwi-Pearl Harbour
"Ndiza kukuthabatha ekhaya kwakhona uKathleen" Imbali kunye neNgoma